3 सुपर सकारात्मक सोच प्रविधिको - व्यक्तिगत विकास क्याफे
3 सुपर सकारात्मक सोच प्रविधिको
पोस्ट व्यवस्थापक | सेप्टेम्बर 6, 2019 | सकारात्मक सोच, व्यक्तिगत विकास, आत्म-सुधार |0|
1 कसरी सकारात्मक सोच प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ
1.1 तपाईंको व्यक्तिगत विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सोच प्रयोग गर्नुहोस्
1.2 सकारात्मक पुष्टि
1.3 सकारात्मक सोच र प्राकृतिक स्वास्थ्य
तपाईको जीवनलाई सुधार्नको लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मध्ये एक सकारात्मक मानसिकता अपनाउनु हो। सकारात्मक सोच वास्तवमै हामी सबैको लागि 'पूर्वनिर्धारित सेटिंग' हुनु पर्दछ।
यद्यपि बिभिन्न कारण र अनुभवका कारण धेरै मानिसहरु सकारात्मक तरीकाले सोच्न कसरी बिर्सन्छन्। स्वचालित रूपमा सोच्नुको सट्टा "म यो गर्न सक्छु।" तिनीहरू सोच्छन् "के म यो गर्न सक्छु?"
व्यक्ति प्रायः उनीहरूले यो गरिरहेको महसुस बिना वास्तवमै गर्छन्। चाहे यो सीखिएको व्यवहार वा विश्वासको कमी हो, यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ उनीहरूको 'आत्म-कुराकानी' परिवर्तन गर्दै'।
चाँडो तपाईं एक सकारात्मक मानसिकता मा लिनुहोस् र तपाईंको आत्म छवि बढावा राम्रो। तपाईंले वास्तवमै भिन्नता देख्नुहुनेछ जुन यसले तपाईंको दृष्टिकोण र जीवनमा पार्दछ।
कसरी सकारात्मक सोच प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ
सकारात्मक सोचको कुञ्जी भनेको यसलाई तपाईंको एक हिस्सा बनाउनु हो, यसलाई जीवनमा निरन्तर तपाईंको दृष्टिकोणको रूपमा अपनाउनु हो। यदि तपाईं निराश हुनुहुन्छ र अचानक सकारात्मक सोच जान दिने निर्णय गर्नुभयो भने, यसले केही समयको लागि काम गर्न सक्दछ।
तर यदि यो तपाईंको दिनचर्या, बानी र सोच्ने प्राकृतिक तरिकाको हिस्सा हैन भने; त्यसो भए ढिलो वा चाँडो तपाईं फेरि आफ्नो पुरानो सोच्ने तरिकामा बहाव गर्न लाग्नुहुनेछ। जब यो हुन्छ तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि सकारात्मक सोचले काम गर्दैन र यसलाई पूरै छोड्छ।
त्यसैले माथिको जोगिन र समृद्धि र पूर्णता अनुभव गर्न को लागी यहाँ जीवन को प्रस्ताव छ तीन सरल प्रविधिहरु जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ इम्बेड सकारात्मक सोच तिम्रो जीवनमा:
सकारात्मक सोच तकनीक एक: दिमागमा तपाईंको नयाँ सकारात्मक फ्रेम साझा गर्नुहोस्। आदर्श रूपमा यो तपाईंको परिवारसँग दिन को लागी एक उपयुक्त बिन्दुमा हुन सक्दछ जब तपाईं सबै एकसाथ बस्नुहुनेछ, सायद खानाको समयमा। फेरी प्रत्येक व्यक्तिको बिन्दु बनाउनुहोस् र सबैसँग बाँडफाँड गर्नुहोस् उनीहरूको दिनको सकारात्मक भागहरू।
दुबैलाई बताउन र राम्रो अनुभवहरू सुन्नुहोस् उनीहरूले जे पनि गर्न पनि यो राम्रो छ। अरूलाई संलग्न गराउनु भनेको यो मात्र हो कि तपाईं सकारात्मक रहिरहनुको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्न, सामूहिक जिम्मेवारीको साथ सकारात्मक छलफल हुनु हुँदैन।
सकारात्मक सोच तकनीक दुई: नकारात्मक विचार छोड्नुहोस्। एउटा विशेष उल्लेखनीय क्षमता जुन मानिससँग छ हाम्रो आफ्नै टाउकोमा रहेका विचारहरू छनौट गर्न सक्षम हुनु। हामी सधैं नकारात्मक विचारहरू हाम्रो दिमागमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्षम हुन सक्दैनौं तर हामी तिनीहरूलाई त्यहाँ रहनबाट रोक्न सक्छौं।
जतिसक्दो चाँडो तपाईले यसमा परिवर्तन गर्न सचेत निर्णय लिनु भयो मा एक नकारात्मक सोच याद गर्नुभयो, यसलाई जान दिनुहोस्। तपाईं ध्यान केन्द्रित गर्न एक सकारात्मक सोच छनौट गर्न यो जान सक्नुहुन्छ, कुनै पनि विचारहरू गर्दछ, यो पूर्ण रूपले अनियमित हुन सक्छ, तपाईंको मनपर्ने छुट्टीको खुशीयाली मेमोरीले राम्रोसँग काम गर्दछ!
सकारात्मक सोच तकनीक तीन:
नकारात्मकलाई सकारात्मकमा बदल्नुहोस्। यो एक क्लिचको एक बिट लाग्न सक्छ तर यो काम गर्ने तरिकाको रूपमा अपनाउनु खराब होईन। तपाईले यो कार्य गर्नको लागि के गर्नुपर्दछ खुला दिमाग रहनु, रचनात्मक हुनु र समस्या पछाडि हेर्नको लागि इच्छुक हुनु आफ्नो जीवन सुधार्नुहोस्.
मानौं तपाईं आफ्नो खुट्टा भाँच्नुहोस् र तपाईं काममा जान सक्नुहुन्न। अवश्य पनि तपाइँ एक समयको लागि तल हुन लाग्नुहुन्छ तर जति सक्दो चाँडो आफैले आफैंलाई लिन सक्नुहुन्छ र एक सकारात्मक खोज्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँसँग अझ धेरै के हुन सक्छ त्यो समय हो। त्यसोभए किन यसलाई राम्रो प्रयोगमा राख्नु भएन? नयाँ भाषा सिक्नुहोस्, एक पाठ्यक्रम लिनुहोस् जुन तपाईंलाई काममा पदोन्नतिमा मद्दत गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले स्थितिबाट सकारात्मक लिनुभयो।
माथिको बानीलाई तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा बनाउँदा निश्चित रूपमा वृद्धि, खुशी, पूर्ति र सफलताको लागि नेतृत्व गर्दछ। भाग्यले साथ दिओस्।
तपाईंको व्यक्तिगत विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सोच प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको जीवनमा यस्तो धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन सकारात्मक सोचबाट लाभ उठाउँदछ। तपाईंको परिवर्तनहरूलाई स्थायी बनाउने उत्तम विधिहरू मध्ये एक हो एक व्यक्तिगत विकास योजना बनाउने.
तपाईंको योजनामा ​​सकारात्मक सोच समावेश गर्नुहोस्। सोच्नुहोस् तपाईको व्यक्तिगत विकास योजना 'के गर्न सक्ने' मनोवृत्तिसँग कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ।
तपाईले सकारात्मक सोचको प्रक्रियाको साथ तालिका बनाउनुहुँदा, तपाईले आफ्नो सोचलाई सुदृढ पार्न सकारात्मक affirmations को प्रयोग गर्नु पर्छ।
सकारात्मक सोच र प्राकृतिक स्वास्थ्य
एक पटक तपाईं सकारात्मक सोचको शक्ति महसुस गरेपछि, तपाईं यसलाई आफ्नो जीवनको अन्य क्षेत्रहरूमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, के तपाईंले सकारात्मक सोचले तपाईंको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई विचार गर्नुभयो?
अधिक र अधिक मानिसहरू यसको लाभहरूको सराहना गर्दै छन् प्राकृतिक स्वास्थ्य उपचार। जब तपाईं सकारात्मक सोच अपनाउनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा बढी चासो लिनुहुन्छ।
पछिल्लोकार्यस्थल बदमाशी र यसको सामना कसरी गर्ने पहिचान गर्दै
अर्कोसकारात्मक सोचको साथ तपाईंको स्वास्थ्य कसरी सुधार गर्ने
आत्म सुधार के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?